နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » Health » နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
Min Thuta | Health, Knowledge | December 29, 2019
ကဲမကြာခင်မှာ Happy New Year လည်းရောက်တော့မှာမို့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမယ့် လိုက်နာသင့်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်… 1. အာဟာရမျှတစေရန်အချိုးကျစားပါ ကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးရရန်အတွက် အာဟာရဓာတ်ပေါင်း ၄၀ ထက်ပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ် အစာအမျိုးစားတမျိုးထဲစားရုံနဲ့ မရနိုင်ပါဘူး မည်သည့်အစားအစာကိုမဆိုအာဟာရမျှတအောင်စားဖို့လိုပါတယ် ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် အဆီဓာတ်များတဲ့အစားအစာကိုနေ့လည်စာအနေနဲ့စားထားလျင်ညစာကိုအဆီဓာတ်နည်းတဲ့အစားမျိုးရွေးချယ်သင့်ပါတယ် ညစာကိုများများစားထားလျင် နောက်တနေ့မှာငါးစတဲ့အဆီနည်းတဲ့အစာမျိုးစားသင့်ပါတယ်။
2. သင့်ရဲ့ Diet plan အတွက် ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ကြွယ်ဝပါစေ Diet လုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့စားသုံးတဲ့အစားအစာတစ်ဝက်ရဲ့ကယ်လိုရီဟာ ကောက်နှံ,ဆန်,ပါစတာ, အာလူးနဲ့ပေါင်မုန့်လိုကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေကနေရသင့်ပါတယ်။အဆိုပါအစားအစာထဲကအနည်းဆုံးတမျိုးတော့နေ့စဉ်စားတဲ့အစားအစာထဲမှာစားသင့်ပါတယ်။ဂျုံနဲ့လုပ်ထားသောအစားအစာများဖြစ်တဲ့ ပေါင်မုန့် ကောက်နှံ ပါစတာတို့ဟာလဲ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစေပါတယ်။
3. ဟင်းသင်းဟင်းရွက်နဲ့အသီးအနှံများကိုနှစ်ခြိုက်စွာစားပါ အသီးအနှံနဲ့အရွက်တွေဟာ ဗိုက်တာမင် သတ္တုဓာတ်နဲ့ အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာမို့အရေးပါတဲ့အစားအစာတွေပါ။အနည်းဆုံးတနေ့ငါးမျိုးတော့ပါဝင်အောင်စားသင့်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် လတ်ဆတ်တဲ့အသီးဖျော်ရည်တစ်ခွက်ကိုမနက်စာအနေနဲ့သောက်သုံးသင့်သလို ပန်းသီးတစ်လုံး ဖရဲသီးစိတ် စတာတွေကိုအစာပြေအနေနဲ့စားသင့်သလို အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုလဲ စားသုံးသင့်ပါတယ်။
4. အချိုဓာတ် နဲ့ အငန်ဓာတ်စတာတွေကိုလျှော့စားပါ အငန်ဓာတ်များများစားခြင်းဟာသွေးတိုးရောဂါနဲ့နှလုံးသွေးကြောနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေမြင့်မားပါတယ် ။အငန်ဓာတ်လျော့ချဖို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အချိန်မှာSodium ဓာတ်လျော့နည်းတဲ့အစားအစာကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်ပါတယ် ။ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာလဲအငန်ဓာတ်ကိုလျော့နည်းအောင်ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေကိုအစားထိုးချက်သင့်ပါတယ် ။ အစာစားတဲ့စားပွဲပေါ်မှာဆားမထားခြင်းဟာလဲ ဆားကိုထပ်မထည့်အောင်ကူညီရာရောက်ပါတယ်။သကြားဓာတ်မြင့်မားစွာပါတဲ့အချိုရည် နဲ့အစားအစာတွေအစား ချိုတဲ့အသီးအနှံတွေကိုအစားထိုးစားသင့်ပါတယ်။
5. ရေများများသောက်ပါ လူတယောက်ဟာအနည်းဆုံး ရေ 1.5 လီတာတော့သောက်သုံးသင့်ပါတယ် ။ရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့အချိန်ဆိုပိုမိုလိုအပ်ပါတယ။ချွေးထွက်များတဲ့သူတွေအတွက်လဲ ရေများများသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ရေကတော့အခြေခံလိုအပ်တဲ့အရည်ပါ။အခြား အသီးဖျော်ရည် နို့အခြားအရည်အမျိုးမျိုးကိုလဲသူ့အချိန်နဲ့သူသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ အထက်ပါနည်းလမ်းတွေဟာအပြောလွယ်ပေမဲ့ နေ့စဉ်လိုက်နာပြီးစားသုံးဖို့တော့ခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းအကျင့်ယူနေထိုင်စားသောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျန်းမာလှပတဲ့ဘဝလေးရမှာအမှန်ပဲနော်။
ဒီအချက်လေးတွေကို လိုက်နာပြီး နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
by Min Thuta on February 9, 2020 -0Comments
မိတ်ဆွေသင်ဟာ စပျစ်သီး ကြိုက်တဲ့သူတစ်ယောက်လား? ဒါဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြသွားမယ့် အကြောင်းအရာကို ဖတ်သွားသင့်ပါတယ်။ စပျစ်သီးမှာပါဝင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့… -...
by Min Thuta on February 3, 2020 -0Comments
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ နေရာဒေသတွေမှာ Coronavirus ပြန့်ပွားနေပြီး သေဆုံးသူ ၂၀၀ ကျော်အထိ ဖြစ်လာပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း အနည်းငယ်တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့...
by Min Thuta on January 6, 2020 -0Comments
ဒီတစ်ခေါက် ဖော်ပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ သံပုရာသီးစားရင် ဘာတွေကောင်းကျိုးရှိလဲ ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်မလဲဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သံပုရာသီးစားခြင်...